Clipcentric na-enye ndị ọrụ ya ọtụtụ nhọrọ nke ngwa ọrụ na ndebiri na-enye njikwa zuru oke na usoro ọ bụla nke usoro mmepụta nke na-eweta mgbasa ozi mgbasa ozi na-anabata ozi ọma. Ndị otu mgbasa ozi nwere ike ịmepụta ngwa ngwa ma zụlite mgbasa ozi HTML5 siri ike nke na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu na gburugburu ebe obibi ọ bụla. Ebe Drag-na-Dobe - Na-eji nwayọ dọrọ ma dobe ihe mgbasa ozi n'ime ebe ọrụ akọwapụtara ngwaọrụ maka njikwa zuru oke, yana ebe ihe ị hụrụ bụ ihe ị nwetara. Oru ederede HTML5 siri ike - Mepụta
Oghere nke ngwa mkpanaka bụ asọmpi na ụbọchị nke ịmepụta ngwa, na-akwụ ụgwọ ole na ole, ma na-atụ anya ịlaghachi na ntinye ego nọ anyị n'azụ n'ọtụtụ ọrụ. Agbanyeghị, ịzụrụ ihe dị n'ime ngwa na mgbasa ozi ngwà na-aga n'ihu na-enyere aka na-echekwa ego dị egwu nke ndị mmepe egwuregwu na ngwa ngwa ekwentị na-etinye. Vungle bụ otu n'ime ndị isi na ụlọ ọrụ a, na-enye ndị mbipụta SDK siri ike maka mgbasa ozi vidiyo mmekọrịta
Kpụrụ dị mkpa ma a bịa na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ịntanetị na nha oku ime ihe. Kpụrụ na-enyere akwụkwọ dị ka nke anyị aka ịhazi ndebiri anyị ma hụ na nhazi ahụ ga-anabata mgbasa ozi nke ndị mgbasa ozi nwere ike meworị ma nwalee n'ofe net. Site na Google Adwords ịbụ onye nnabata mgbasa ozi, arụmọrụ ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa gafere Google na-ekwupụta ụlọ ọrụ ahụ. Top Nrụọrụ Mgbasa Ozi na Google Leaderboard - pikselụ 728 n'obosara site na 90 pikselụ ogologo Half-Page -
Ihe Nlere Anya na-enye ụlọ ọrụ na nnukwu ụdị ohere iji kesaa ọdịnaya ha nye ndị na-ekiri ha dị mkpa. Uzo ha ruru ihe karịrị 380 nde ndị na-ekiri vidio kwa ọnwa. Ruo taa, ha atụleela ijeri vidio vidio atọ, ihe karịrị narị nde vidio 3, na ihe karịrị puku vidio mgbasa ozi 500. Ihe ngosi a na-ahụ anya na-ewepụta mgbasa ozi vidiyo ziri ezi nye onye ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị na onye nkwusa ziri ezi, na-enyere ndị mgbasa ozi aka ịlụ ọgụ mgbasa ozi mgbasa ozi ka ha na-achọpụta.